पूर्वराजाको आग्रह प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई का’रबाही गर्न – Action Media
पूर्वराजाको आग्रह प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई का’रबाही गर्न
जालझेल सिर्जना गरी ज’नदायि’त्वबाट पन्छिन खोज्ने सरकारलाई जनताले कहिले मा’फी नदिने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य जस्ते ग’म्भीर समस्यालाई थाती राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरुले देशलाई दु’र्घटनातर्फ धकेल्न उद्यत रहेको समेत उहँंले उल्लेख गर्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि शनिबार सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै पूर्वराजा शाहले भन्नुभयो
यस वै’श्विक म’हामारीको सं’कटका बेला जन दा’यित्वबाट प’न्छिनका लागि असामयिक राजनैतिक जा’लझेल सिर्जना गरी, जनताको स्वास्थ्य जस्तो ग’म्भीर स’मस्यालाई था’ती राखेर सत्ता र श’क्तिको बलमा स्वार्थका निम्ति देशलाई दु’र्घटनातर्फ ध’केल्ने शा’सक र उनका म’तियारको अ’परा’धलाई जनताले कहिले क्ष’मा गर्ने छैनन् ।
उता नेपाली कांग्रेसका प्रभावशालि नेता गगन कुमार थापाले गणतन्त्रमा सम्मान दर्जाले नभई कामले आर्जन हुने बताएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई तिमि भनेको भन्दै आ’पत्ति जनाएपछि नेता थापाले यस्तो बताएका हुन्।
थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ”राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेकोमा खड्ग ओलीलाई चित्त दु’खेछ, बिचरा! गणतन्त्रमा सम्मान दर्जाले होइन कामले आर्जन गर्ने हो कमरेड!!” “सम्माननीय राष्ट्रपति”बाट तपाईं हुँदै तिमीमा कसले ओ’रालेको? भन्ने प्रश्न पनि थापाको छ। आफ्नै क’र्म र प्रवृत्तिले विद्या भण्डारीलाई सम्मानको शिखरमा अ’डिन नसकेर ओ’रालेको थापा बताउँछन्।
“‘सम्माननीय राष्ट्रपति’बाट तपाईं हुँदै तिमीमा कसले ओ’रालेको? आफ्नै कर्म र प्रवृत्तिले भण्डारीलाई सम्मानको शिखरमा अ’डिन नसकेर ओरालेको हो।”, थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘तिमी’ भनिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका थिए।
ओलीलले यसो भनेका थिएमैले आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको औपचारिक वक्तव्य हरेँ, राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्न सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन । तिमी, उनी, यसो गरिन् …यस्तो भाषा बोलिएको छ ।
जनसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सि’द्धान्तका आधारमा कुनै नालयक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तोकस्तो भाषा बोलेर नि’हुरिएर केके भाषा बोल्ने यी मान्छेहरु । आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छन् ।तपाई पनि भन्नु हुँदैन भन्ने ठान्छन् राष्ट्रपतिलाई ।
Prevकोरोनाका बीच अमेरिकामा अर्को भाइरसको संक्रमण, कुखुरासँग टाढा रहन आग्रह
Nextराष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी